जिबनशैली – ThikThak News
तपाइँ हाम्रो भान्सामा पाक्ने तरकारीको मूल्य अकासिएको छ। बजारमा तरकारीको भाउ उच्च हुनु रहस्यमाया छ। तरकारीको भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको आपूर्ति विभागकाको अनुगमनका क्रममा पता लागेको हो। आजको कान्तिपुरमा …
युद्द ग्रस्त मुलुकका एक बालकले द्वन्दका कारण आफ्नो खुट्टा गुमाउनु परेको थियो। मात्र ८ महिनाका हुदा अहमद रहमानले देशमा जारी द्वन्द्वका कारण आफ्नो खुट्टा गुमाउनु पर्यो। त्यसबेला उनको एउटा खुट्टा …
साँझा विवेकशील पार्टीका केन्द्रीय संयोजक रवीन्द्र मिश्रले जनताले विश्वास गरे अबको २५ वर्ष भित्र देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने दावी गरेका छन्। जुनसुकै पार्टीमा आवद्ध भएपनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नलागे देश …
मानिसको स्वाभाब राशिअनुसार व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा थाहा छ तर कुन राशीको व्यक्तिको स्वभाब कस्तो हुन्छ भन्ने धेरै लाइ थाहा नहोला ? सायद धेरैलाई यस …
खेल सकिन्ने बित्तिकै चिसो पानी पिउदा एक खेलाडीको मृत्यु
एक खेलाडीले पानि पिउनु अघि ध्यान नदिदा ज्यान गुमाएको छ। खेल सकिए लगत्तै अत्याधिक चिसो पानि पिउदा उनको मृत्यु भएको हो। पानि अत्याधिक चिसो रहेको र खेलका कारण तातो रहेको …
ठगिएको भन्दै दर्जनौ पीडित युवाहरुको गुनासो, सामुदायिक स्कुलमाथि आक्रोश । सिधा कुरा रिपोर्ट – भिडियो
May 5, 2019 May 5, 2019 - LeaveaComment
देशमा रहेको बेरोजगारि फाइदा उठाउदै रोजगारी दिने नाममा ठग्ने गिरोह सक्रिय छन । पत्रिकामा छपाएर रोजगारी दिने भन्दै ठग्ने , कतिले ट्रेनिङ्ग पछि काम दिने भन्दै सुल्क उठाएर फरार हुने …
दुनियामा रहेका मानिसहरु फरक फरक प्रवृतिका हुन्छन। हरेकको राशी अलग हुन्छ र सोहि राशी अनुसार पनि मानिसको स्वभाब पनि अलग हुन्छ। कोहि शालीन हुन्छ त कोहि रिसाहा हुन्छन। यस्तै राशिले …
क्रिश्चियन बन्दा कार्की दम्पतिको बिल्लिबाठ, मानसिक यातना देखि कुटपिट सम्मको खुलासा ( भिडियो )
एक दम्पतिले मिडियामा आफ्नो दुखेसो पोख्दै आएका छन्। केहि दिन अघि समेत समाचार बनेको यी दम्पतिले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा भिडियो अन्तर्वार्तामा खोलेका छन्। उनीहरुले आफुलाई क्रिस्टियन धर्ममा लागेपछि बिल्लीबाठ भएको …
April 28, 2019 - LeaveaComment
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा लिइने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आइतबारबाट सुरु हुँदैछ । परीक्षा वैशाख २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कक्षा ११ को परीक्षा वैशाख २९ गतेबाट हुनेछ । देशभर …
नेपाली जनताले दुख पाएको भन्दै रास्ट्रपतिको सवारीमा रविको सुझाब…
राष्ट्र प्रमुखलाई पटक–पटक विवादमा ल्याउन हामीलाई रहर छँदै छैन । तर राष्ट्रपतिको सवारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नसकेका कारण गणतन्त्रप्रति नै सर्वसाधारणको वितृष्णा जाग्न बेर लाग्दैन । यहि कार्यक्रममा हामीले ५÷७ …
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.३ नारायणगढ निवासी उदय कुमार पिया उमेरले ९१ वर्ष पुगी सके । तर उनी उमेर भन्दा धेरै फुर्तिला छन् । उनको एउटै मात्र इच्छा थियो समाजका केही …
एक दम्पत्तीको दर्दनाक वियोग ! श्रीमतीको १३ दिने तिथिमा श्रीमान अस्पतालमा,
केहि दिनअघि गुल्मीमा भएको जीप दुर्घटनाले निम्ताएको एक दम्पत्ती बीचको वियोगान्त कथा निकै दर्दनाक बनेको छ । चैत २८ गते मुसिकोट–१ च्यानडाँडामा भएको जीप दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएकी मालिका–१ ह्वाङ्गदी …
April 20, 2019 - LeaveaComment
रबि लामिछानेको रास्कोट अस्पतालको लागि समाजसेवी र अभियन्ता इशा गुरुङले ठुलो सहयोग रकम आज हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। समाजसेवी इशा गुरुङकै पहलमा संकलन भएको रकम आज न्युज २४ टिभिको लोकप्रिय …
बारा पर्सामा आएको भिषण हावाहुरीका कारण पिडामा परेको सर्बसाधारणका लागि भनेर धुर्मुस राहत सामग्री लिएर पुगेका छन्। धुर्मुसले हावाहुरीले प्रभावित भनेको बारा जिल्ला ४ सय परिवारका लागि आफ्नो फाउण्डेशन मार्फत …
नेपालकी ५ वर्षिया प्रिन्शाले राखिन देशको नाम, बिदेशमा फहराईन नेपालको झण्डा
इजिप्टको हुर्घादा शहरमा यहि मार्च २१ देखि २८ सम्म भएको मिनी मोडल वर्ल्डमा नेपाली बालिकाले जितेकी छिन। टिभी स्टार्ट इन्टरनेशनल टिभी फेस्टिवलद्वारा आयोजित ब्युटी पिजेन्ट कार्यक्रममा ‘मिनी मोडल वल्ड २०१९’ …
हात गुमाएपनि हिम्मत नगुमाएकि सबिता ! सपना पछ्याउदै अघि बढ्दै ( भिडियो सहित )
March 24, 2019 March 24, 2019 - LeaveaComment
भर्खरकी १६ वर्षीया सविताका दुवै हातका औला हरु छैनन्। लेख्न कलम च्याप्न उनलाई समस्या छ । दुवै हात कुहिनोभन्दा तल काटिएका छन् । तर पनि हिम्मत हारिनन आफ्नो पढ्ने इच्छा …
करेन्ट लागि दुवै हात गुमाएकी १६ वर्षीया सविता एसईई परिक्षा दिदै ………
बिद्यालयका बिद्यार्थी हरुका लागि आइरन गेट मानिने एसईई परिक्षा सुरु भैसकेको छ। देशभर बाट लाखौ बिध्यार्थिहरु एसइइ परिक्षा दिदै छन्। उनी बिद्यार्थी हरु मध्ये एक हुन् सविता थापा । परिक्षा …
नेपाली चेली प्रतिष्ठा बेलायतको सुन्दरी प्रतियोगिता मिस इंग्ल्यान्डमा भिड्दै
एक नेपाली चेलीले बेलायतको सुन्दरी प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्ध जनाएकी छिन। बेलायतको सुन्दरि प्रतियोगिता मिस इंग्ल्यान्ड २०१९ का लागि ति नेपाली चेलीले मैदानमा उत्रिएकी हुन् । अल्डरसट निवासी प्लोर प्लान आर्किटेक्ट २५ …
भारत को चर्चित शो सारेगामापामा पछिल्लो समय नेपालका २ बालक हरुले धमाका मचाउदै आएका छन्। आफ्नो गायन क्षमताकै कारण उनीहरुले गयको उत्कृस्ट गीतका कारण उनिहरुको प्रसंसा हुदै आएको छ। भारत …